Kedu uru nke igwe ojii na-eweta igwe ojii | ECommerce ozi ọma
Ma ọ bụ a weebụsaịtị ma ọ bụ ibe e-commerce, web hosting bụ otu ihe dị mkpa mgbe ị malitere a Ntanetị weebụ oru ngo. Enwere dị iche ụdị ntanetị weebụ dị na enweghị obi abụọ na igwe ojii na-eweta ntanetị bụ otu n'ime nhọrọ ndị a tụrụ aro.
Uru nke igwe ojii na-eweta ntanetị (Cloud Cloud)
Ọtụtụ Companieslọ ọrụ Ecommerce Ha na-acho ichogharia udiri ndi nlekota a na ihe kpatara ya bu na o na enye ha otutu uru na uru karia web hosting.
Un Cloudgwé ojii dabeere na web mba Ọ dị mma maka azụmaahịa na-eto eto na-achọkarị bandwidth chọrọ. Ọ bụrụ na mkpa gị na-abawanye, ọ dị mfe ịgbasa ikike gị na igwe ojii, otu ahụ ka ọ dị mgbe mkpa gị belatara. Mgbanwe a na-enye nnukwu uru karịa ndị asọmpi.
Na igwe ojii na-eweta nnabata web, ọ dị mfe iji mejuputa nkwado data na mgbake, ma e jiri ya tụnyere usoro nnabata. Nke a na-azọpụta oge ma na-ezere nnukwu ego mbụ.
Akpaka software mmelite
na ndị na-eweta websaịtị N'ime igwe ojii ha na-elekọta sava ma hapụ mmelite ngwanrọ oge niile, gụnyere mmelite nche. Nke a na - eme ka ọ ghara ịdị mkpa ichegbu onwe gị gbasara nsogbu mmezi, ilekwasị anya na ihe ndị ọzọ dị mkpa, dị ka uto azụmaahịa.
Na-arụ ọrụ site n'ebe ọ bụla
Na a ígwé ojii mba Nwere ike ịrụ ọrụ site na ebe ọ bụla dịka ịchọrọ naanị njikọ Internetntanetị. Imirikiti ọrụ nnabata web na-enye ngwa mkpanaka dakọtara na ngwaọrụ niile.
Tinyere ihe niile a dị n'elu, ụlọ ọrụ weebụ nke igwe ojii na-enyekwa nchebe ka mma n'ihi na echekwara data na igwe ojii ahụ ma enwere ike ịnweta ya n'agbanyeghị ihe mere kọmputa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Kedu uru nke igwe ojii na-eweta ntanetị
Igodo 4 iji nwee ihe ịga nke ọma na ire ahịa email